Gweru news, views, and solutions: Mahwani aya atanga?
Mahwani aya atanga?
“Mahwani aya atanga” akanga ari mazwi ekazeve-zeve aitaurwa neruzhinji rwevanhu vemuGweru mushure mekunge vaona motokari yeimwe shoroma yatswanywa mutsaona kusiya yaitwa zen’e risina maturo.
NeChina masikati, motokari yechechi yeZAOGA neimwe yemukorokoza mukuru anozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti “Big Tich” zvakabonderana pamharadzano dzemigwagwa Moffat naFifth muguta reGweru.
Nzvimbo iyi iri pedyo nechipatara chakazvimiririra chaDoctor Purazi.
Vaivepo tsaona ichiitika vanoti mudzimai wa”Tich” akatadza kunyatsochaira nemazvo motokari yaaitekenya chena yerudzi rweToyota D4D ndokuita mahwekwe neyekwaBaba Ezekiel Guti.
YaTich yakaputana rimwe divi sehembe yabva mumuromo medhongi rinezhara.
“Ruzhinji rwakatanga kungoti mahwani aya atanga, kureva kuti hazvaiva zvega kuti motokari yemukuru uyu iite tsaona, zvichibva mukutaura-taura kuti anenge anobata-bata,” akadaro mumwe murume akakumbira kusanyorwa zita rake achitya kubvumburudzwa naTich, uyo anonzi ane chinya chiri pahuma.
“Nguva ichangopera, kunonzi pane tukomana twupfupi-pfupi twakaonekwa twoda kunochinja order maChicken Inn yepaGweru twuchibva mumotokari yake, iye akatwudzora nezwi rizere nehasha, chikonzero vanhu vakati mahw
ani atanga,’ akaenderera mberi murume uyu.
Muporofita Walter Magaya
“Mukoma wangu, mufunge pfuma yekubata-bata inokudzokera. Izvozvi imwe zvakare mbozha yezvegoridhe yekuShurugwi yakaonekwa paterevhizheni kuchechi yeProphetic Healing and Deliverance (PHD) kwa Muporofita Walter Magaya, mushure mekunge pfungwa dzemudzimai wayo dzadambuka,” akaenderera mberi nekutiruma nzeve.
Zvinonzi hazvo hapana akafa, kana kukuvara zvakaipisisa patsaona iyi.
Posted by Nhasi MuGweru at 06:45